Dental Care – Page3– Healthy Life Journal
သွားအကြောထုတ်ကုသပြီး အစွပ်စွပ်တဲ့အခါ …
မေး။ ။ သွားတစ်ချောင်းကို သွားအမြစ်ထုတ် (RTC) ကုသလိုက်ရင် အဲဒီသွားကိုအစွပ်စွပ်ဖို့ သွားကြွေ အထူ ဘယ်လောက်အထိကိရိယာနဲ့ စားပေးလိုက်ရသလဲ။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတား။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ သွားက ပိုးစားပြီး အကြောကို ပေါက်သွားလို့ရှိရင်...
သွားအမြစ်ကောင်း၊ မကောင်းသိချင်ပါတယ် . . .
မေး။ ။သွားအမြစ်ကောင်း၊ မကောင်းကို ဘယ်လိုစမ်း သပ်သိရှိနိုင်ပါသလဲဆရာ။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတား။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင်(မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး) ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသည်။ ဖြေ။ ။သွားအမြစ်ကတော့ များသောအားဖြင့် ပိုးစားပြီး ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ သွားဖုံးရောဂါကြောင့် ဖြစ်ဖြစ်သွားအမြစ်ထိပ်အထိ ပိုးတွေက ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ပိုးတွေရောက်သွားရင် သွားအမြစ်ထိပ်မှာ ပြည်တည်တဲ့အနာ...
မကြာခဏ သွားကိုက်သွားနာ ဖြစ်လျှင်
သွားကိုက် သွားနာတဲ့ဝေဒနာက သိပ်မပြင်းထန်ရင်တောင် သွားဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က လိုအပ်သလို ကုသပေးတာကြောင့် သွားမကျိုးအောင် ကာကွယ်ထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သွားကိုက်သွားနာ မကြာခဏ ဖြစ်တတ်သူတွေ အနေနဲ့ သွားတိုက်တာ၊ သွားကြားပွတ်ကြိုးသုံးတာနဲ့ ဖလိုရိုက်ပါတဲ့ ဆေးရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းတာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးပါ။ လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ တစ်နေ့...
သွားတစ်သက်တာ ခိုင်မြဲစေဖို့ . . .
မေး။ ။ သွားတစ်သက်တာ ခိုင်မြဲစေဖို့ ဘယ်လိုအချက်တွေ လိုက်နာပေးရပါမလဲ ဆရာ။ ကိုလွင်၊ တွံတေး။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ သွားတစ်သက်တာ ခိုင်မြဲစေဖို့က ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ ဂရုစိုက်ဖို့ဆိုရင် အိမ်မှာ သွားတိုက်တဲ့အလေ့ အကျင့်တွေကို...
သက်ကြီးရွယ်အိုဘဝအထိ သွားကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေရန် . .
မေး. သက်ကြီးရွယ်အိုအထိ သွားတစ်ချောင်းကို အမြစ်ထုတ် (RCT)နည်းနဲ့ ကုရတဲ့အဆင့်မရောက်ဖို့နဲ့ သွားတစ်ချောင်း ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုရှိစေဖို့ ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သင့်ပါသလဲ။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. သွားခိုင်ခံ့ဖို့က သွားတိုက်တာကို နည်းမှန်လမ်းမှန်လုပ်ပေးဖို့ပဲ။ လူတွေက လက်ကလေးနဲ့ သွားတွေကိုတိုက်တာ...
သွားကျဉ်သက်သာစေတဲ့ သွားတိုက်ဆေးကို ဘာကြောင့် ကြာကြာမသုံးသင့်တာလဲ။
မေး ။ ကျွန်တော် သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သွားတွေက မကြာခဏ ကျဉ်တတ်လို့ သွားကျဉ်သက် သာစေတဲ့ သွားတိုက်ဆေးနဲ့ သွားတိုက်ရင်သက်သာလာတာကိုခံစားရမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီသွားတိုက်ဆေးကို ကြာရှည်မသုံးသင့်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင်(မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။...
ခံတွင်းနံ့ နံတဲ့ပြဿနာ အဖြေရှာ
မေး ။ ဘီပိုးရှိပါတယ်ရှင့်။ အသည်းကိုဓာတ်မှန်ရိုက်တော့ အသည်းက ကောင်းသေးတယ်။ ဘီပိုးကို တိုက်နိုင်တဲ့ပိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်၊ အသည်းအတွက် ဆေးသောက်ဖို့မလိုဘူးလို့ပြောပါတယ်။ သွား နှင့်ခံတွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာဝန်အတော်များများနဲ့လည်းပြပြီး စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။ သွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သန့်ရှင်းရေးတွေလည်း လုပ်ပါတယ်ရှင့်။ ခံတွင်းအနံ့ အရမ်းနံတယ်လို့ ခံစားနေရပါတယ်။ သွားနဲ့ခံတွင်း...
သွားချေးကျောက်နှင့် ဖာထားသောသွား ဘယ်လိုခွဲခြား
မေး. သွားချေးကျောက်ရှိတဲ့သွားနဲ့ ဖာထားတဲ့သွား ဘယ်လိုခွဲခြားသိရှိနိုင်ပါသလဲ။ ဖာထားတဲ့သွားကို သွားချေးကျောက်ထင်ပြီး ခြစ်လိုက်ရင် အဲဒီသွားတွေက ယိုင်နဲ့လာပြီး လှုပ်သွားမှာလား။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတား။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ် ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. သွားချေးကျောက်ဆိုတာ သွားရဲ့အခြေတွေမှာရှိတဲ့ ကျောက်ပါ။ လျှာဘက်က...
သွားနှင့် ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက် အမျိုးသားတိုင်း သိရှိလိုက်နာသင့်သည့်အချက်များ
၊ ကိုမိုး ၊ သွားနဲ့ ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက် အမျိုးသားတွေရဲ့ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းတဲ့အပိုင်းက အားနည်း လေ့ရှိပါတယ်။ ခံတွင်းကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ဆိုတာ သွားတွေ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တာက အခြေပြုပါတယ်။ သွားတွေ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီး ခံတွင်းတစ်ခုလုံး အနံ့အသက်နဲ့ အပြစ်အနာအဆာ ကင်းနေမှသာ အ ဆင်ပြေနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။...
သွားအမြစ်ကကောင်းပြီး သွားကျဉ်နေရင် . . .
မေး. သွားအမြစ်ကကောင်းပြီး သွားကျဉ်နေရင် သွားအမြစ်ထုတ်ကုသလို့ ရပါသလား။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတား။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. သွားကျဉ်တယ်ဆိုရင်တော့ သွားအမြစ်ထုတ်ကုသဖို့မလိုပါဘူး။ ကျဉ်တဲ့အကြောင်းရင်းက ကြွေသွားလွှာပါးသွားလို့ ကျဉ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ အကြောပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ အမြစ်ထုတ်ရတယ်၊ အကြောမပေါက်ဘူးဆိုရင်တော့ သွားအမြစ်ထုတ်ကုသမှုမလိုဘဲ သွားကျဉ်တာပျောက်စေတဲ့...